RW Sharmarke iyo Madaxweynaha koofur Galbeed oo gaaray Galkacyo, – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaRW Sharmarke iyo Madaxweynaha koofur Galbeed oo gaaray Galkacyo,
Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa galabta gaaray magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, si ay u sii xoojiyaan waan waanta nabadeed ee ka socota magaalada, kaasoo lagu soo afjarayo colaadii maalmahan ka taagneyd.
Ra’iisul Wasaaraha oo ka soo kicitimay magaalada Muqdisho ayaa waxaa wehliya Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Xildhibaano.
Wafdiga ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo ku soo dhoweeyay Guddigii dowladda Federaalka u saartay xalinta dagaalka, iyadoo caawa magaalada ay ka bilaaban doonaan wada hadalada nabadeed.
Ilo wareedyo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ku soo fool leeyahay, si dhinacyada waan waanta wada ula kulmaan, isla markaana dhanka Galmudug lagu qanciyo in ciidamadooda kala baxaan qeybo ka mid ah waqooyiga Gaalkacyo oo la sheegay inay shalay ku soo durgeen.
Wararka ayaa sheegaya inuu socdo qorshe la doonayo in la isugu keeno Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug, waxaana dadaaladan xoogooda wada Mas’uuliyiinta sare ee dowladda iyo Maamul goboleedyada.
Madaxweynaha Puntland ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Gaalkacyo, iyadoo Guddi horu dhac ah u magacaabi doono wada hadalada ka bilaabanaya Gaalkacyo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo xubnihii gudiga nabadeynta ee la socday ayaa maanta la kulmay labada dhinac, inkastoo wali aanay xal rasmi ah gaarin, hase ahaatee waxaa muuqata in wafdiga Ra’iisul Wasaaraha uu hogaaminayo ay miisaan u yeelayaan wada hadalada, taasoo ka dhiga karta mid guuleysta.
Dhinaca kale wafdigii uu hogaaminayay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa iyana la filayaa inay u soo ambabaxaan Gaalkacyo, si ay uga qeyb qaataan nabadeynta iyo joojinta dagaalka, waxaana Axmed Madoobe oo ku sugan Garowe uu sheegay in aanu laaban doonin illaa arrinta Gaalkacyo xal laga gaaro.
DAAWO SAWIRADA: Wafdi uu Hogaaminayo Wasiirka Maaliyada oo Gaaray Beledweyne Xarigan ka jaray Mashaariic kala duwan,